ပင်မစာမျက်နာသင်၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နာInboxProfile InfoPrivacy SettingsEmail SettingsConnectionsအသင်းဝင်များInvite MoreဗီဒီယိုများAdd Videosအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများသုတဆောင်းပါးများအလုပ်ခေါ်စာများဆက်သွယ်ရန်
ဘာသာစကား လေ့လာသူတစ်ဦးအနေနဲ့ သင်ဟာ ဝေါဟာရ အသစ်တွေကို တိုးပွားအောင် အမြဲ ကြိုးစားရပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဝေါဟာရ စာရင်း အရှည်ကြီးတွေရေးမှတ်တာတို့၊ flash card ဝေါဟာရကဒ်ပြားတွေနဲ့ လေ့ကျင့်တာတို့လုပ်ပြီး စကားလုံးအသစ်တွေကို မွှေနှောက်ရှာဖွေ မှတ်သားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ စကားပြောမယ်လည်း ကြံလိုက်ရော ခေါင်းထဲက ကျက်မှတ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်ကြလို့ နောက်ဆုံးတော့ သင်အကြိမ်ကြိမ်သုံးခဲ့ဖူး၊ သိခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလုံး အဟောင်းတွေကိုဘဲ ပြောင်းသုံး ပြောရတာဘဲမဟုတ်ပါလား။ ဘာသာစကား လေ့လာသူတွေအတွက် စကားလုံး အသစ်တွေကို မှတ်မိတာနဲ့ စကားပြောရာမှာ စကားလုံး အသစ်တွေကို သုံးတာတို့ဟာ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ အရာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောက်မှာ စကားလုံး အသစ်တွေကို စွဲမြဲအောင် မှတ်မိရုံမျှမကဘဲ စကားပြောတဲ့ အခါမှာပါ ပြန်သုံးတတ်အောင် ကူညီပေးမယ့် ဗျူဟာအချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကျဘန်းဝေါဟာရ မဖြစ်စေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တာကိုဘဲ မှတ်မိလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားလုံးပေါင်းစုံ ရောရောပါဝင်တဲ့ ဝေါဟာရ စာရင်း ပြုစုတာ ဒါမှမဟုတ် index card (ဝေါဟာရကဒ်) ပြုလုပ်တာတို့တွေဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကို ပြန်လည်မှတ်မိဖို့၊ ပြန်လည်အသုံးချဖို့အတွက် သိပ်ပြီး ထိရောက်မှု မရှိဘူးလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ဝေါဟာရ စာရင်းတို့ ဝေါဟာရကဒ်တို့ဟာ သင်သိပြီးသား၊ လေ့လာထားပြီးသား စကားလုံးတွေကို ပြန်နွှေးရုံအတွက် ဆိုရင်တော့ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စကားလုံးအသစ်တစ်လုံးကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိနို်င်အောင် လုပ်ချင်ရင် မိမိအတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ (သက်ဆိုုင်မှုရှိတဲ့) အရာတစ်ခုခုနဲ့ အဲ့ဒီစကားလုံး အသစ်ကို ချိတ်ဆက်ပြီး မှတ်သားပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားတဲ့၊ အရမ်းစွဲလမ်းတဲ့ အကြောင်းအရာ context တစ်ခုခုထဲမှာ ထည့်သုံးတဲ့ စကားလုံးကို သင်ကပုိပြီး ကောင်းကောင်းမှတ်မိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပြုချက် ။ ဗြိတိသျှကောင်စီရဲ့ LearnEnglish website ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ အပြန်အလှန် လေ့ကျင့် ပြောဆိုလို့ရတဲ့ ဗီဒီယိုတွေ၊ ဂိမ်းတွေ၊ podcast တွေ အပုံအပင်ရှိပါတယ်။ သင်ဘာကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဖြစ်ဖြစ် သင့်အတွက် ရွေးစရာတစ်ခုခုကတော့ အမြဲရှိနေပါတယ်။ အခြားသော လေ့လာသူတွေနဲ့လဲ သင့်အတွေးအမြင်တွေ ဖလှယ်လို့ရပါတယ်။ ၂။ စကားပြောတွေကို အတွဲလိုက်လေ့လာပါ
အကယ်လို့ စကားကို အတွဲလိုက် (စကားလုံးအများကြီးပါတဲ့ စကားစု အတွဲလိုက်) ဒါမှမဟုတ် စကားပြော scripts (ပုံသေကားကျ အပြန်အလှန်ပြောဆိုပုံ) စတာတွေနဲ့ လေ့လာရင် ပိုမိုစွဲမြဲစွာ မှတ်မိပါတယ်။ ဥပမာ - phrasal verb ဖြစ်တဲ့ ‘to come up with’ ကိုဒီအတိုင်းဘဲ အလွတ်မှတ်မဲ့အစား phrase တစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ‘to come up with an idea’ ဆိုပြီး ကျက်မှတ်ပါ။ ဒီနည်းနဲ့ ကျက်မှတ်ရင် ဒီ phrasal verb ကို ဝါကျတစ်ကြောင်းမှာ ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကို အနည်းဆုံးတော့ သင်သိသွားမှာပါ။ အလားတူဘဲ ‘hello’ နဲ့ ပုံစံတူတဲ့ နှုတ်ဆက်နည်း ၃၃ မျိုးကို ကျက်မှတ်မဲ့အစား အပြန်အလှန် စကားပြောပုံစံ ဖြစ်တဲ့ ‘Hello, how are you? – I’m fine, thank you.’ ဆိုပြီး ကျက်မှတ်ပါလေ။ အကြံပြုချက် ။ အကယ်လို့သင်က ဗွီဒီယို၊ တီဗွီ၊ ရုပ်ရှင် စတာတွေနဲ့ လေ့လာရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် FluentU ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီထဲမှာ အပြန်အလှန် ကျင့်လို့ရတဲ့ caption စာတမ်းထိုးတွေ ပါဝင်ပြီး၊ စကားလုံး တစ်လုံးပေါ် ထောက်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ရုပ်ပုံတွေ၊ အနက်အဓိပ္ပါယ်တွေ အပြင်အသုံးဝင်တဲ့ ဥပမာတွေပါ ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ဖတ်စရာ အကြောင်းအရာထဲမှာ သုံးထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို အထူးပြုတဲ့ အခြား စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းတဲ့ သင်ထောက်ကူ သင်ခန်းစာအရင်းအမြစ် တွေလည်း တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ -'SpeakSmart' collection on Instagram မှာဆိုရင် စကားလုံးတွေ၊ ပြောစကားတွေအတွက် ဥပမာတွေကို လူကြည့်များတဲ့ ရုပ်သံစီးရီးတွေထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းပေါင်းများစွာ အသုံးပြုပြီး ရှင်းပြပါတယ်။ အကယ်လို့သင်က စာဖတ်ရတာ ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင် စာပိုဒ်တို short text လေးတွေကို ဖတ်ပါ။ ဥပမာ - ကာတွန်း ဖတ်တာလိုမျိုးပေါ့။ Grammarman လိုမျိုး ဘာသာစကား လေ့လာသူတွေအတွက် ကာတွန်းအပါအဝင် ဖတ်ရင်း နားထောင်လို့ရတဲ့ ကာတွန်းတွေလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အမြောက်အများ ရှိနေပါပြီ။
၅။ တွဲမှတ်လို့ ရတဲ့ ရီစရာလေးတွေ ဖန်တီးပါ Mnemonic လို့ခေါ်တဲ့ စကားလုံးနဲ့ သူ့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကြားထဲက ဆက်စပ်မှုကို ခိုင်မြဲစေမဲ့ ရီစရာ စကားစု သို့မဟုတ် ပုံပြင်လေးတွေ ဖန်တီးကြည့်ပါ။ စာလုံးပေါင်းရခက်တဲ့ စကားလုံးတွေကို ကျွန်တော်ပြန်အစဖော်ပြီး မှတ်မိအောင် လုပ်တဲ့အခါတိုင်း ဒီနည်းလမ်းက ထိထိရောက်ရောက် ရှိလှပါတယ်။
ရ။ ဝေါဟာရရင်းမြစ်ကို ရှာဖွေလေ့လာပါ။ စကားလုံးသစ်တစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အဘိဓာန်မှာ ရှာမကြည့်ခင် အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ခန့်မှန်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့ မူလ အရင်းအမြစ် root အပြင် prefix တွေ suffix တွေကိုပါ လေ့လာပါ။ အကယ်လို့ သင်က အခြား ဘာသာစကားအချို့ကိုလည်း နားလည်မယ်ဆိုရင် စကားလုံးတွေရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာ တူညီမှုတွေကိုလည်း တွေ့ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားလုံး အသစ်တွေရဲ့ ပေါ်ပေါက်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း အရင်းအမြစ်ကို သုတေသနလုပ်ပြီး လေ့လာရင် အဲ့ဒီစကားလုံး အသစ်တွေကို ပိုမိုမှတ်မိပါတယ်။
၉။ ချရေးပါ စကားလုံးအသစ်တွေကို (ဒါမှမဟုတ် စကားလုံးအသစ်ကိုထည့်သုံးထားတဲ့ ဝါကျတွေကို) ချရေးခြင်းအားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ရော စာလုံးပေါင်းအတွက်ပါ သင့်မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာ စွဲလမ်းနေစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ သင် သို့မဟုတ် သင်သိတဲ့ သူတစ်ယောက်ယောက်အတွက် လက်တွေ့ကျတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို တွေးပြီး ရေးချပါ။
ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော် ရဲ့ ထိပ်တန်းအကြံပြုချက် ၁၀ ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်ထံမှာ သင့်အတွက် အလုပ်ဖြစ်မယ့် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ နည်းလမ်းတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုခုရတဲ့ အထိ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပါလေ။ အကောင်းဘက်ကနေ အမြဲတမ်းကြည့်ပြီး မိမိလုပ်သမျှကို ကျေနပ်ပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေ။ British Council Voices Magazine မှ Svetlana Kandybovich ၏ Ten ways to learn new words asalanguage learner ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အောကျမှာတော့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ကြောငျးသားတှေ ဖနျတီးထားတဲ့ mnemonic တှပေါ။‘career’ - car and beer‘island’ - is land‘to lose’ – un-oh, I’ve lost an ‘O’ (အိုတဈလုံး ပြောကျသှားပွီ) (loose နဲ့ မမှားရအောငျ မှတျတဲ့ နညျး)အကွံပွုခကျြ ။ Memrise ဆိုတဲ့ ဆိုဒျမှာ သုံးစှဲသူတှေ ဝိုငျးပွုစုထားကွတဲ့ ‘memes’ ဆိုတာမြိုးတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မိမိကျိုယျတိုငျ တီထှငျ ဖနျတီးမယျဆိုရငျတော့ စကားလုံးတှကေို ပိုပွီးမှတျမိမယျ့ အခှငျ့အလနျးပိုမြားတာပေါ့။
အကွံပွုခကျြ ။ ရကျရှညျ ကာလ ‘spaced repetition’ platform နဲ့ ဝါကွ အပွညျ့ ရေးခပြွီး လကေ့ငျြ့လို့ရတဲ့ Anki လို software တှအေပွငျ မိမိကိုယျပျိုငျ ပွနျလှနျလလေ့ာရေး revision အခြိနျဇယားကို ရေးဆှဲထား နျိုငျပါသေးတယျ။ သငျ့စကားလုံး အသဈတှကေို ကဒျပွားလေးတှပေျေါမှာ တဈဖကျမှာ ဝါကအြပွညျ့ ရေးခထြားပွီး ကနျြတဈဖကျမှာ စကားလုံးရဲ့ အနကျအဓိပ်ပါယျ/ ဘာသာပွနျ/ ပုံစသညျတှပေါတဲ့ index card လေးတှေ လုပျထားပါ။ ပွီးတော့ အဲ့ဒီကဒျလေးတှကေို ပွနျလှနျ ကွညျ့ရှု မှတျသားဖို့ အခြိနျဇယားပွုလုပျပါ။ ကဒျပွားလေးတှကေို အစီအစဉျတဈကပြွုလုပျပွီး အမြိုးအစား ၃မြိုးခှဲလိုကျပါ။အစိမျးရောငျ - နောကျထပျကွညျ့စရာ သိပျမလိုတော့တဲ့ စကားလုံးမြားအဝါရောငျ - မကွာခဏ ထပျကွညျ့ပေးရမယျ့ စကားလုံးမြားအနီရောငျ - အကွိမျမြားစှာ ထပျခါထပျခါ ကွညျ့ရမယျ့ စကားလုံးမြား စသညျဖွငျ့ ဖွဈပါသညျ။ ရ။ ဝေါဟာရရငျးမွဈကို ရှာဖှလေလေ့ာပါ။
အကွံပွုခကျြ ။ စကားလုံးတှေ၊ အီဒီယံတှရေဲ့ စတငျရာ ရငျးမွဈတှကေို လလေ့ာခငျြရငျ Online Etymology Dictionary ဆိုတဲ့ ဆိုဒျဟာတျောတျောလေး ကောငျးမှနျပါတယျ။ ၈။ မိမိကိုယျကို စကားလုံးအသဈတှနေဲ့ စိနျချေါကွညျ့ပါ
အကွံပွုခကျြ ။ Quizlet.com မှာ ဉာဏျစမျးတှေ၊ ဂျိမျးတှေ အမြားကွီးရှိပွီး ဝငျကွညျ့လို့ရပါတယျ။ ၉။ ခရြေးပါ
British Council Voices Magazine မှ Svetlana Kandybovich ၏ Ten ways to learn new words asalanguage learner ဆောငျးပါးကို ဘာသာပွနျဆိုထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။ Tags:
Permalink Reply by aungnaingthu on Tuesday Good, i like this article. Thank you.
Welcome toMyanmar Network
Post နှင့် Comment များမတင်မီ အသင်းဝင်တိုင်း ဖတ်ရှုရမည့် စည်းကမ်းများ Featured Discussions
4th Video Storytelling Workshop: Exploring Human Rights and Advocacy
ယူကေပညာရေးပြပွဲများကို မတ်လတွင် မန္တ္တလေးမြို့နှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် ကျင်းပမည်
Reading Challenge: Big Friendly Read (for7to 15 year olds)
လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း - လူမှုအကျိုးပြုစီးပွားရေး စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း အစီအစဉ်
UK စာမေးပွဲသတင်းများ ၂၀၁၇ (ဖေဖော်ဝါရီ)
© 2017 Created by Myanmar Network. Powered by Badges | Report an Issue | Terms of Service